ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းရေး၊ ဒေသခံပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝမြှင့်တင်နိုင်ရေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းသည် သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် မကွေးတိုင်း​ဒေသကြီး၊ သယံဇာတ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဝန်ကြီး ဦးမြင့်ဇော်၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါလျက် တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၊ ငမင်ကြိုးဝိုင်းအတွင်း စိုက်ပျိုးထားရှိသည့် တရုတ်-မြန်မာချစ်ကြည်ရေး ဇီဝစံပြသစ်တောစီမံကိန်းသို့ ရောက်ရှိပြီး၊ စိုက်ခင်း တည်ထောင် စိုက်ပျိုးဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု၊ သစ်မျိုးအလိုက် စိုက်ပင်များ ပြုစုထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်မှုတို့ကို ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်၊ အဆိုပါစိုက်ခင်းအား တရုတ်-မြန်မာချစ်ကြည်ရေးအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မိုးရာသီတွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ စိုက်ပျိုးကုန်ကျစရိတ်ကျခံ၍ သစ်တောဦးစီးဌာနက တာဝန်ယူ စိုက်ပျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းအား UNDP မှ UNDP Administrator ဖြစ်သူ Mr. Achim Steiner နှင့်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့်သတင်း
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းသည် UNDP မှ UNDP Administrator ဖြစ်သူ Mr. Achim Steiner နှင့်အဖွဲ့ ယနေ့ ၈-၈-၂၀၁၇ ရက်နေ့၊ (၁၃:၀၀) နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးသည်။
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းသည် သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါလျက် ပဲခူးရိုးမဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ သစ်တောစိုက်ခင်းများပြုစုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ သဘာဝတောထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများအားဇူလိုင် ၂၉ ရက်နေ့တွင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
အာရှဒေသသစ်တောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲအစည်းတည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်၌ မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုး
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့၌ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဆိုးလ်မြို့ရှိ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အာရှဒေသသစ်တောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အဖွဲအစည်း တည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်၍ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းအား ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဘရာဇီးနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Antonio J.M. de SouzaeSilva မှ လာရောက်တွေ့ဆုံ
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းသည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဘရာဇီးနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Antonio J.M. de SouzaeSilva အား ယနေ့ ၂၅-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့၊ (၀၉:၁၅) နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းအား ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေဆိုင်ရာ အထူးအစီရင်ခံစာ တင်သွင်းသူ မစ္စယန်ဟီလီမှ လာရောက်တွေ့ဆုံ
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းသည် ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေဆိုင်ရာ အထူး အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းသူ မစ္စယန်ဟီလီ အား ယနေ့ ၂၀-၇-၂၀၁၇ ရက် (ကြာသပတေးနေ့) မွန်းလွဲ ၁၃:၀၀ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းအား ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန (DFID/UKAid) ၏ အခြေခံ အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Ms. Kirstyn Thomson မှ လာရောက်တွေ့ဆုံ
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းသည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန (DFID/UKAid) ၏ အခြေခံ အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Ms. Kirstyn Thomson အား ၂၈-၆-၂၀၁၇ ရက်နေ့၊ နံနက် (၀၉:၃၀) နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးဧည့်ခန်းမ၊ ရုံးအမှတ်(၂၈) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ သား၊ သမီးများအား ပညာရည်ချွန်ဆု ချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပ
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် ဂုဏ်ထူးများဖြင့် ထူးချွန်စွာ အောင် မြင်ခဲ့ကြသော သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ သား၊ သမီးများအား ပညာရည်ချွန်ဆု ချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်(၉:၀၀)နာရီ တွင် နေပြည်တော်ရှိ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး အင်ကြင်းခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအုန်းဝင်းတက်ရောက်၍ ဂုဏ်ပြုအမှာစကားပြောကြားသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲတော် တက်ရောက်၍ အောင်သပြေပင် စိုက်ပျိုးပေး
၂၀၁၇ ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလှုပ်ရှားမှု မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲတော် ကို ဇွန်လ(၂၀)ရက်နေ့နံနက် (၇) နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်ရှိ ဖိုးဇောင်တောင် ကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ် ၁၇ ၌ ကျင်းပရာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် တက်ရောက်၍ အောင်သပြေပင်ကို စိုက်ပျိုးပေး